एमाले चितवनमा पद मिलाउन कसरत ! – Nepal Press
एमाले चितवनमा पद मिलाउन कसरत !
२०७८ भदौ ३० गते ८:४२
चितवन । नेकपा एमाले चितवनले २०७५ जेठ २ को अवस्थामा जिल्ला कमिटीलाई लैजान कसरत तीव्र पारेको छ । जिल्ला इञ्चार्ज काशिनाथ अधिकारीले गृहकार्य भैरहेको बताए । ‘विवाद छैन, कमिटी कति सानो-ठुलो बनाउने भन्नेमा बहस चलिरहेको छ’, उनले भने, ‘नेतृत्वका सवालमा विवादनै छैन ।’
एमाले नेता तथा प्रतिनिधिसभा सभा सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले आफ्नै अध्यक्षतामा बैठक बसेर पार्टी जेठ २ को अवस्थामा लगिने बताउँदै आएका छन् । २०७३ कार्तिक ९ मा पोखरेल जिल्ला अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । एमाले-माओवादी एकिकरण पश्चात नेकपा बनेपछि उनी जिल्ला सचिव बनेका थिए । नेता पोखरेलले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनकै चरणमा रहेकाले केहि दिन लम्बिएको दाबी गर्छन् । ‘२८ गते गृहकार्य नपुगेर असोज ५ मा जिल्ला कमिटीको बैठक राख्दैछौँ’, उनले भने, ‘छलफलमै छौँ, विवादरहित जिल्ला कमिटी बन्नेछ ।’ जिल्लाभित्र वडातहसम्म एकताको सन्देश दिन जिल्ला अध्यक्ष बनेरै काम गर्ने अडानमा उनी छन् ।
तर, नेकपा एस छाडेर तटस्थ बसेका तेजेन्द्रबहादुर खड्का अध्यक्ष पदको खोजीमा छन् । उनी ओली समूहका नेतालाई हराएर उपाध्यक्षमा निर्वाचित व्यक्ति हुन् । २०७३ को जिल्ला अधिवेसनबाट ३ जना ओलीपक्षका र ८१ जना जना माधव पक्षका नेताहरु जिल्ला नेतृत्वमा निर्वाचित बनेका थिए ।
नेपाल-खनाल समूहको राम्रो पकड मानिएको चितवनमा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे र कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले माधव समूह छाडेर एमालेमै बसेपछि त्यसको फाइदा एमालेलाई पुगेको छ । २ जना प्रदेश सांसद र केही वडाध्यक्षबाहेक चितवनका जनप्रतिनिधि सबै एमालेमै छन् । तर, ओली पक्षीय नेताहरुलाई मनाउन माधव पक्ष त्यागेर आएको जिल्ला नेतृत्वलाई सजिलो छैन ।
नेकपाभित्रको किचलोपछि नेपाल-खनाल समूहबाट तत्कालिन जिल्ला उपाध्यक्ष तेजेन्द्रबहादुर खड्का र ओली समूहबाट तत्कालिन जिल्ला सचिव पार्वती रावलले कमिटीहरु बनाएका थिए । चैत ७ देखि पोखरेल माधव समूह छाडेर पार्टी एकताको पक्षमा सक्रिय छन् । खड्का भदौ २५ मा नेकपा एसको जिल्ला नेतृत्व लिन छाडेर पर्ख र हेरको स्थितिमा छन् ।
ओली समूहबाट जिल्ला सचिवमा निर्वाचित राष्ट्रिय सभा सदस्य पार्वती रावल ओली विरुद्ध आफ्नै नेताहरु आलोचक बनेर बिरोध गर्दा जिल्ला सम्हालेर बसेकी थिइन् । ५ वर्षको यो अवधिमा पोखरेल, खड्का र रावलले अध्यक्षको अनुभव संगालेका छन् । तीनै जना अध्यक्षमा आँफु भए संगठन बलियो बन्ने, एकताको सन्देश राम्रो जाने भन्दै सो पदको दाबी गरेको स्रोतको दाबी छ ।
नेता पोखरेल सांसद बनेका बेला एकिकरणपूर्व खड्काले कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका थिए । बादल समूहका नेताहरु पनि सम्माजनक जिम्मेवारीको पर्खाईमा छन् । बादल समूहका नेता प्रकाश खनाल शैलेशले आँफु जिल्ला अध्यक्षको दाबी नगर्ने बताउँछन् ।
‘सहमति कार्यान्वयनको पक्षमा छौँ, एकताका प्रक्रिया र जेठ २ दुबै अवस्था लागु होस्’, उनले भने, ‘अध्यक्ष बन्नुपर्छ भन्ने दाबी विरोध छैन, तर एकता पक्षीयलाई सम्मानजनक जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।’ पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) समूहका करिब २८ जना नेताहरु नेकपा जिल्ला कमिटीमा थिए ।
बादल पक्षीय नेता प्रकाश खनाल शैलेशलाई फागुन ५ मा सचिवको जिम्मेवारी दिइएको थियो । जगन्नाथ आचार्य र बाबुराम खरेल एमाले प्रदेश कमिटी सदस्य बने । ओली पक्षले एमाले चितवनको ६ सय १ सदस्यीय जिल्ला कमिटी बनाएको थियो । तर, २०७३ मा जिल्ला कमिटी ९६ सदस्यीय थियो । शैलेशलाई सचिव पदमै राख्ने वा अन्य जिम्मेवारी दिएर मनाउने भनेर ओली पक्षका नेताहरु सक्रिय छन् ।
प्रकाशित: २०७८ भदौ ३० गते ८:४२